Iindaba-Indima yetape yesiponji ye-EPDM kwiimveliso zesiponji ezinganyangekiyo ngobushushu kunye neendlela zokwenza isicelo
I-Butyl yerabha inokugqwesa igesi kunye nokuchasana nobushushu, kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yeerabha ezahlukileyo ezinobushushu, iimveliso zesiponji esingenabushushu bushushu yenye yazo. Abavelisi abaninzi bokwenza ityhubhu yangaphakathi bayazi ukuba inkqubo ye-butyl yangaphakathi yokuqhubekeka ityhubhu iya kongeza isixa esifanelekileyo serabha ye-EPDM okanye irabha erisayikilishiweyo, injongo kukwandisa ubomi benkonzo yetyhubhu yangaphakathi ye-butyl. Ngaba kunyanzelekile ukuba ungeze irabha ye-EPDM xa usebenzisa ibutyl irabha ekrwada enganyangekiyo yimveliso yerabha yesiponji? Ukuba kunjalo, yeyiphi imiba ekufuneka iqatshelwe xa kusongezwa?
1. Indima yerabha ye-EPDM kwiimveliso zesiponji ezinganyangekiyo ngobushushu
I-EPDM irabha / irabha erisayikilishiweyo emva kokuqina kokuguga, iimveliso zerabha zebutyl ziya kuthamba kwaye zincamathele emva kokuguga, ke ukusetyenziswa kwesixa esifanelekileyo serabha ye-EPDM kwimveliso yerabha yesiponji engaginyisi ubushushu engenza iziphene zerabha yebutyl, ukuphucula intsebenzo ye-butyl enganyangekiyo yimveliso yesiponji.
I-EPDM irabha / irabha erisayikilishwe kunye ne-butyl yerabha, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nokuguga (ngakumbi ukumelana ne-ozone) kune-butyl yerabha; Iimveliso zesiponji ezinganyangekiyo ngobushushu kumgangatho ofanelekileyo werabha ye-EPDM zinokuphucula ukumelana nobushushu kweemveliso zogwebu, ukumelana nokuguga, ukuqhubeka nokwandisa ubomi benkonzo yesiponji esinganyangekiyo ngobushushu.
2. Iimveliso zesiponji ezinganyangekiyo bubushushu kwizakhono zokukhetha iirabha ze-EPDM
Ukusetyenziswa kwezixhobo zerabha ze-EPDM ukuphucula ukusebenza kweemveliso zesiponji ezinganyangekiyo bubushushu, ukusuka kwiindleko zokusebenzisa i-EPDM irabha ephinda isetyenziswe. Umxube we-EPDM ongafakwanga irabha okanye inkunkuma yeemveliso zerabha ze-EPDM ziphinde zenziwa zaze zaphinda zenziwa kwakhona i-EPDM irabha ephezulu kunye neqondo eliphantsi lokumelana nobushushu, iipropathi zokulwa ukwaluphala kunye nerabha ye-EPDM ngokufanayo iyafana, ixabiso liphantsi kakhulu kuneerabha yokuqala ye-EPDM, kwaye ukuhambelana kwerabha ye-butyl kungcono, Unokuphucula ukusebenza ngokubanzi kweemveliso zesiponji ezinganyangekiyo ngobushushu phantsi kwesiseko sokunciphisa iindleko zemveliso eluhlaza. Ukulungiselela iipropathi zomzimba kunye nezomatshini zeemfuno ezingqongqo zesiponji esinganyangekiyo ngemveliso 2LLYY422-SJ, abavelisi bemveliso zerabha banokuxutywa kunye nenani elifanelekileyo le-EPDM yerabha kwirabha ye-butyl ukuqinisekisa umgangatho wemveliso.
3.Uyihlengahlengisa njani irabha ye-EPDM kunye nesantya sebutyl yerabha yokuvezwa
Njengoko sonke sisazi, ukuvuthwa kwemveliso yerabha yesiponji kunye nokwenza amagwebu kwenziwa ngaxeshanye, isantya se-vulcanization kunesantya esiphuphuma amagwebu okanye ngokukhawuleza kunesantya esinegwebu esiza kuchaphazela isiphumo sogwebu seemveliso ezinegwebu kunye nokusebenza ngempumelelo; I-rubber ye-butyl kunye ne-EPDM ye-rubber vulcanization performance, iimeko ze-vulcanization zihlukile, ngoko ke abavelisi beemveliso zerabha kufuneka babe luyilo olufanelekileyo lwenkqubo yokuhluza ukuqinisekisa ukuba i-vulcanization kunye ne-foam ngexesha elinye. Ngokubanzi, abavelisi beemveliso zerabha banokukhetha isalfure vulcanization, kunye nokusetyenziswa kwesixhobo sokukhawulezisa irabha, ukusetyenziswa kwe-arhente enegwebu ye-OBSH foam, ukulungelelanisa okungcono phakathi kwesantya sokuqunjelwa kunye nesantya sogwebu.
Ukusetyenziswa kwe-EPDM irabha ephindiweyo okanye i-EPDM irabha ukuphucula ukusebenza kunye nobomi beemveliso zesiponji ezingagqibi ubushushu ezigqityiweyo, abavelisi beemveliso zerabha kufuneka bahlengahlengise ngokufanelekileyo uhlobo kunye nenani lezinye iiarhente ezifanayo kwifomula, ungasebenzisa semi Ukuqiniswa kokuqiniswa kwekhabhoni emnyama, ukuthambisa ioyile yeparafini, iparafini wax yokulwa ukuguga, kunye nokusetyenziswa kwe-zinc oxide, i-asidi ye-stearic kunye ne-magnesium oxide, ukuphucula ngakumbi i-butyl / EPDM yeerabha enganyangekiyo kwimveliso yesiponji yemveliso yesiponji Ukusetyenziswa kwe-zinc oxide , I-asidi ye-stearic kunye ne-magnesium oxide inokuqhubeka nokuphucula ukusebenza kunye nobomi benkonzo ye-butyl / EPDM yeemveliso zesiponji ezinganyangekiyo.